Villa Magnolia - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKosmas
I-villa entle enegadi enkulu kunye ne-kiosk ethandekayo yebarbecue
Imizuzu eyi-7 ngemoto ukusuka kwisixeko sase-Ioannina, i-10 min ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, i-30 min ukusuka eMetsovo, i-40 min ukusuka kwi-Zagorochori ekufutshane kunye neyure kunxweme olusondeleyo
Indawo yokupaka iimoto ezi-4
Ikhemesti, indawo yokubhaka kunye nevenkile yenyama kwi-100m kunye nevenkile enkulu ivula yonke imihla ukusuka kwi-9: 00-23: 00 kwi-200 m.
Imizuzu emi-3 ngemoto ukusuka kwiKhampasi yeDyunivesithi kunye neSibhedlele seDyunivesithi
Ilungele izibini, abahambi beshishini, amaqela kunye neentsapho kunye nalo lonke uhlobo lwabahambi
I-villa yangasese iMagnolia itholakala ePedini, iikhilomitha ezisi-7 ukusuka kwisixeko esihle sase-Ioannina, inkulu-dolophu yase-Epirus.
Irhangqwe yigadi enkulu entle (i-800 square metres) enekhiyoski ethandekayo yokosa inyama.
Indawo izolile kwaye izolile kwaye inika inzuzo yokuba kufutshane nomnyango wesixeko.
Yimizuzu engama-30 ukusuka eMetsovo, imizuzu engama-45 ukusuka eZagorochoria kunye neyure ecaleni kolwandle olukufutshane.
I-villa yakhiwe kumanqanaba amane, ineminyango emibini kwaye ibandakanya amagumbi okulala amahlanu.
Kumgangatho ophantsi kukho amagumbi amabini okuhlala anendawo yomlilo epholileyo, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukwakho neW.C. kunye negumbi lokulala elinamawele elinegumbi lokuhlambela labucala
Izinyuko eziphambili zikhokelela kumgangatho wokuqala apho kukho amagumbi okulala amathathu. Okokuqala ligumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu, isofa kunye negumbi lokuhlambela labucala. Kukho amagumbi amabini okulala angaphezulu aneebhedi ezinkulu kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elizimeleyo. Igumbi ngalinye linendawo yalo yabucala enika umbono omkhulu kwigadi kunye neentaba
Ukuthatha izitebhisi uzifumana ukwigumbi elisezantsi eliphangaleleyo nelipholileyo elinebhedi enamawele kunye nesofa. I-attic inegumbi layo lokuhlambela labucala kunye neholo elinesinki kunye nefriji encinane. Kulo mgangatho uphezulu kukho iitesi ezimbini ezinegadi, isixeko kunye nentaba
Onke amagumbi ethu anelanga kakhulu imini yonke, ane LCD plasma TV, iiwodrophu ezinkulu kunye namathafa ajonge igadi, intaba kunye nesixeko. Zonke iilinen ezimhlophe kunye neetawuli zenziwe nge-cotton egqwesileyo yaseYiputa
Kwabo banomdla wokuzilolonga, siseta ijim encinci ene-treadmill kunye nezixhobo ezithile zomthambo kumgangatho osezantsi oqaqambileyo, njengekona epholileyo enesofa kunye netafile enkulu enemidlalo yebhodi. Ecaleni kwegumbi lomdlalo kukho ikhitshi kunye nefriji kunye negumbi elahlukileyo elinomatshini wokuvasa, isomisi sempahla kunye nebhodi yoku-ayina.
Igadi entle enelanga ifanelekile kubathandi beyoga kunye nalo lonke uhlobo lwemisebenzi okanye ukuphumla kunye nebarbecue kiosk inkulu ngokwaneleyo ukuhlalisa abantu abalishumi elinambini ngesidlo sasemini okanye sangokuhlwa.
Kukwakho nendawo yokupaka iimoto ezintlanu
Indawo inoxolo kakhulu kwaye izolile kodwa yonke into onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho inokufikeleleka. Ikhemesti, indawo yokubhaka kunye nevenkile yenyama ikwi-100m kwaye ivenkile enkulu ivula yonke imihla ukusuka kwi-9: 00-23: 00 kwi-200 m. Ikhampasi yeDyunivesithi kunye neSibhedlele seDyunivesithi zikwimizuzu emi-3 ngemoto
I-villa ilungele izibini, abahambi beshishini, amaqela, iintsapho kunye nazo zonke iintlobo zabahambi.
Ukhetho olutofotofo olunikezela ngamaxesha akhethekileyo okuphumla, i-adventure kunye neeholide zangasese ezikhumbulekayo.
Iintsuku eziyi-7 e Pedini
Le villa ibekwe imizuzu-3 ukusuka kwisiphambuka Egnatia kunye Ionia indlela. Emehlweni prying
Umbuki zindwendwe ngu- Kosmas
Inombolo yomthetho: 00000094104